Izimoto abawubonanga kuphela njengoba izindlela zokuhamba, ngesikhathi samanje sekuyinto kuyingxenye ebalulekile yempucuko. Yingakho izinhlobo ukukhiqizwa izimoto babé ahlukahlukene ngakho, ukunikela imishini nazo zonke izinhlobo besigaxa ahlelelwe ukuhlangabezana ezihlukahlukene nezidingo zamakhasimende. Ngesikhathi imoto emakethe wamanje inikeza ezihlukahlukene enkulu amamodeli kuhluke uhlobo umzimba, zonke izinhlobonhlobo ezingasetshenziswa nakancane ukubizwa ngokuthi Umthandi womculo eziphambili kakhulu.
Injongo eyinhloko auto-European
Emkhakheni wezingalo isiqoqi sama-softwe e mbhangqwana yokugcina emashumini ke lakhiwe futhi zazikhiqiza izinhlobo eziningi ezinkulu zokuguqulwa zemizimba imoto, phakathi lapho, ngokuvumelana izibalo zilinganisela wezazi, kuphela izinhlobo izimoto ngohlobo umzimba kukhona amagama angaphezu kuka-15. Futhi nakhu uthuthuva umbuzo: kungani siyidinga izinhlobo eziningi kangaka emzimbeni? Uma kwakudingeka bathenge imoto, umeluleki gumbi uzokubuza ukuthi ziyini izinjongo adinge into yokuhamba ezomyisa, unomkhaya omkhulu, nganoma yisiphi indawo uhlela ukuya emhlabeni? Ngamanye amazwi, ngeke abone izidingo zakho, nabantu babo, conjugate nge ngemgwaco, eqinisweni, kakhulu. Ngakho, umzimba imoto yesimanje uyakwazi ukuhlangabezana nezidingo ezahlukene ikhasimende: endlwaneni eyakhiwe futhi ebhuthini umthamo, ukuma ukuphakama umshini, izici ngabanye sokusebenza.
izinhlobo Modern ezimoto ngezigaba zabo
imoto IMisa kuhlehlela emuva ekhulwini XX. Leyo mikhumbi lokuqala wawungathi i ukuthutha ezivulekileyo ezingenaso kuqhutshwa hhayi amahhashi, futhi yangaphakathi omlilo engine.
Nge nesidingo esikhulayo izimoto self ezinezinjini ubuchwepheshe ukukhiqizwa kuyaphothulwa, abakhiqizi Inhloso kwakuwukuba ukukhulula izinhlobo izimoto esingagcini nje baphathe abantu, kodwa futhi ukunikeza isivikelo nenduduzo abagibeli. Ngakho kwakunabantu abangu-emizimbeni avaliwe, lapho abantu bavikelekile umthelela ongemuhle izimo zezulu (imvula, iqhwa, umoya, ilanga, abandayo).
Ngesikhathi samanje emizimbeni ngezigaba esigabeni Kwenziwa kuncike kumaphuzu ngemibandela:
Destination (umgibeli umzimba, Umbuso indawo nezimoto ezithwala).
Ngokusho degree of ukucinana.
On tesakhiwo (evulekile, ivaliwe umzimba).
izinhlobo umzimba yelungiselelo
Lokhu umbandela kusigaba inani ukwabelana umzimba ivolumu zibukeke upheqa (amayunithi) ka ngal imoto:
Evenini umzimba ukuphakamisa indawo abagibeli, wezimpahla kungenzeka injini kwelinye Seamless ezibukwayo ingxenye.
Izidumbu injini dvuhobomnyh elise enye ingxenye design (ngaphansi hood), futhi abagibeli futhi izimpahla - omunye (kwangaphakathi)
umzimba Trohobomny siqukethe hood, ngaphansi lapho yangaphakathi omlilo engine gumbi, senzelwe abagibeli futhi ehlukile umthwalo gumbi (isiqu).
Umzimba lomthwalo degree
emizimbeni Vehicle kukhona ikhipha ezahlukene kuncike degree olulindelekile yokucindezeleka kubo:
Ukunikeza umzimba baye izinhlobo eziningi ezivamile imoto (Vaz kuhlanganisiwe). Ukukhethwa yiyona premium auto. sici Functional yalolu hlobo umzimba ukuthi yonke imithwalo isisindo zenzeka izitho zomzimba.
umzimba Polunesuschy kusebenza ukukhiqizwa amabhasi, lapho umthwalo isakazwa phakathi umzimba futhi uzimele.
umzimba zithululwe ogibele Uhlaka esebenzisa Linings ekhethekile zenjoloba. Lokhu umzimba ethatha izintambo umthwalo kuphela eyalo abantu nezimpahla.
Izinhlobo izimoto evulekile-top
Emkhakheni we izimoto nge top evulekile kuhlanganisa onobuhle eziningana, kuhlanganise Convertible hhayi kuphela edumile emhlabeni wonke, kodwa Roadster, Brougham, targa, Phaeton, Spider nabanye. Thina ukuchaza ezivamile:
Convertible, kanye nezinye izinhlobo convertibles, yena bezilokhu kubhekwe njengophawu lokuba ukunethezeka ukunambitheka elicwengiwe. Izikhathi eziningi ungayithola imishini enjalo emazweni kushisa, kuhlanganise nalabo abasezindaweni resort. Design sici trohobomnogo umzimba kophahla alo, okuyinto, enziwa elinama nezimo, eligoqiwe ngemuva esihlalweni ezingemuva. Convertible kungaba ngendlu 4, kodwa kuvamile 2-umnyango amamodeli babe, Nokho, izinhlu ezimbili zamahalananda izihlalo.
Illalah has umzimba voluminous 3 nge esithambile noma esiqinile phezulu Convertible kanye umugqa owodwa phansi, ngaphandle oqeda ingilazi uhlangothi, ngokuvamile ngaphandle ophahleni.
Chaise, kanye Roadster has ophahleni openable, akukho ohlangothini ekuphumeni ingilazi, kodwa inani lezihlalo bengase bazikhandlele 5-6.
Targa - uhlobo umzimba nge somoya eqinile nakho ngeke kusize isilungisiwe. Ngokungafani nezinye onobuhle, convertible, ophahleni targa ivula nje ngenhla izihlalo eziphambili, abagibeli akha endaweni imbozwe ingilazi.
Isigaba izimoto ezithwala nge evaliwe uhlobo umzimba
Izinhlobo ezinkulu nezimoto Coupe uthayipha okulandelayo:
Sedan - trohobomnoe izimoto ezithwala, lapho ingaphakathi, hood futhi isiqu okuchaza zibukeke kahle. Ngasekupheleni kwekhulu lama-20, lolu hlobo umzimba Nokho yisona esikhulunywa abantu abaningi embonini yezimoto, futhi kule akakhulumi uyeza off the line ukukhiqizwa kakhulu ukukhathazeka. Sedan ekhona 2 irowu izihlalo 4-5 izihlalo, ngokuvamile 4 iminyango, kodwa kungase kube inguqulo ngendlu ezimbili.
Universal livelele kwabangani bakhe ukunwebeka lubonakale. Dvuhobomny umzimba inenombolo obungavamile iminyango - ngokuvamile 5, okungenani 3, nge ezingemuva athambekele kakhulu zifana kuya emhlabeni ebusweni. Kakhulu isiqu enkulu namagumbi aphezulu avulekile imigqa 2 lezihlalo ukwenza jikelele nemoto ethandwa.
Hatchback - uhlobo hybrid phakathi sedan futhi inqola esiteshini ehlanganisa induduzo umthamo lokuqala nelesibili. Umzimba inenombolo obungavamile iminyango, omunye esemgwaqweni ngemuva nge eyehlelayo kancane. Uhluka Sedan a eziphephile iDemo labaqaphi elingemuva. Sici sici pheceza lomzila wesibili lezihlalo, okuyinto lihambisana oludidiyelwe gumbi umthwalo gumbi kudala isikhala eyengeziwe.
Van - trohobomny emithathu umnyango (uma egumbini imithwalo ivulekile ngezicabha ezimbili - inani eliphelele iminyango emotweni 4) emzimbeni. Umehluko: umugqa owodwa kuphela lezihlalo kanye umnyango omkhulu kakhulu wezimpahla.
Ukulandwa - umzimba trohobomny, okuyinto has a evulekile wezimpahla isikhala esikhulu, ehlukanisiwe odongeni ingaphakathi kanzima. Libhekisela imoto ishayise.
Evenini - Ushintshe enqoleni, ine irowu ezengeziwe lezihlalo kanye kokwehla ephakeme.
Suv (crossover) - eklanyelwe zifane zenqola esiteshini noma hatchback, ne umehluko ukuthi aphakeme crossover permeability ngenxa emhlabathini ezinkulu imvume. It liwuhlukanise njengoba isihlalo okusezingeni eliphezulu kokwehla yokushayela.
automakers Global akuvezi kuphela izinhlobo izimoto ezithwala, izimoto kwezohwebo ngohlobo emizimbeni njengoba kunabaningi kangaka namuhla. Amaloli zihlukaniswa ngokuyinhloko izimoto kukhona ukuthi kuqala khona ayimpoqo ifreyimu inikezwa, okuyinto ethatha phezu ingxenye umthwalo.
Eurowaggon - ezisetshenziswa kakhulu izimoto kwezohwebo. Ehlanganisiwe ukwakhiwa isisitho selanga ivumela ukulayisha / athula zezitho engenhla kanye ohlangothini.
isitoreji Cold yakhelwe zokuthutha wezimpahla ezidinga lokushisa ekhethekile. Eqinisweni, le ephezulu umthamo efrijini.
Tank ezisebenzayo zokuthutha wezimpahla ketshezi ethangini metal uphawu - ithangi.
umzimba ngci uye ngci umnyango umthwalo ngaphandle esebenzayo ifriji amayunithi. Kwezinye onobuhle, inikeza umsebenzi amalahle van.
Kuvele wezimpahla endaweni evulekile uhlobo evulekile lulwimi.
"Daewoo Gentry": ukubuyekezwa. Daewoo Gentra: Ukucaciswa, izithombe